Maitiro ekuvandudza kubva kuUbuntu 17.10 kana 16.04 LTS kuenda kuUbuntu 18.04 LTS | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekuvandudza kubva kuUbuntu 17.10 kana 16.04 LTS kuenda kuUbuntu 18.04 LTS
Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) yakaburitswa mazuva mashoma apfuura uye kunyangwe Isu takatokuudza zvese zvitsva mushanduro iyi, isu hatina kukuudza maitiro ekugadzirisa.
Muchidzidzo ichi isu tinokuudza nhanho nhanho maitiro ekuvandudza kuUbuntu 18.04 LTS Bionic Beaver kana iwe uchibva kune yazvino Ubuntu 17.10 yakaburitswa vhezheni kana yazvino Ubuntu 16.04 yakawedzerwa rutsigiro vhezheni.
1 Zvinhu zvekuita usati wasimudzira kuUbuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver)
2 Maitiro ekuvandudza kubva kuUbuntu 17.10 kana Ubuntu 16.04 LTS kuenda kuUbuntu 18.04 LTS mumatanho ari nyore
Zvinhu zvekuita usati wasimudzira kuUbuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver)
Tisati tatanga iyo yekuvandudza maitiro isu tinofanirwa kuita zvishoma zvinhu. Ubuntu 18.04 LTS ndeye hukuru hwekuvandudza pamwe nekuchinja kukuru uye nekudaro zvinokurudzirwa kuita backup yakakwana ye data rako nekuti zvikanganiso zvinogona kuitika izvo zvinokutungamira kuti udzore iyo system.
Kune rimwe divi, kana iwe ukashandisa Ubuntu 16.04 neyakagadzika marongero, zvirokwazvo watove wakashandiswa kwazvo kuUnited graphical nharaunda, asi mu Ubuntu 18.04 LTS yakasarudza kuisa iyo GNOME nharaunda nekukasiraKunyangwe Canonical yataura kuti yekutanga haizobviswa panguva yekuvandudza kuti ugone kuisarudza kana iwe uchipinda.
Didier Roche, Ubuntu anobatsira, ambotaurwa nezvazvo kana uchigadzirisa hapana pasuru ichabviswa, asi zvimwe zvehunhu zveUnited zvichachinjirwa padiki padiki kugadzirisa iyo nyowani yeGNOME 3 graphical interface.
Kana izvo zvikati iwe uchiri kuda kugadzirisa kuUbuntu 18.04 LTS ona rairo dzatinokupa pazasi.
Maitiro ekuvandudza kubva kuUbuntu 17.10 kana Ubuntu 16.04 LTS kuenda kuUbuntu 18.04 LTS mumatanho ari nyore
Kusimudzira kubva kuUbuntu 17.10 kana 16.04 LTS kuenda kuUbuntu 18.04 LTS iri nyore kwazvo. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kuvhura iyo Software uye Updates chishandiso, enda kune iyo yekuvandudza tab, enda pasi kuchikamu "Ratidza mavhezheni matsva ekuparadzira" uye ipapo sarudza "Kune chero vhezheni itsva."
Enda kune Terminal (kana pinda Alt + F2 kuti uvhure imwe) wonyora "update-manager -cd" pasina makotesheni, pinda ENTER newindo rekuvandudza richavhura richizivisa iyo nyowani yekuvandudza, tinya bhatani rekuvandudza uye uteedzere matanho.
Munguva yekuvandudza maitiro iwe unozobvunzwa mibvunzo yakati wandei nezvezvazvino maseteni kana zvirongwa zvinoraswa, ndapota sarudza nokungwarira. Maitiro acho achapedzisa kana komputa yako ikatangazve.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Maitiro ekuvandudza kubva kuUbuntu 17.10 kana 16.04 LTS kuenda kuUbuntu 18.04 LTS
Iwe unonzwa Linux Kupindwa muropa, ndiitirewo runako, shambadza iyo yekuisa maitiro ekuisa WXMP3GAIN muUbuntu 18.04.Chirongwa chakanakisa mukushanda kwayo chisingakwanise kushayikwa mune yako runyorwa rwezvirongwa, asi mune iyi nyowani vhezheni handigone kuiisa
Christian B akadaro
Sezvo ini ndichigona kudzokera kuna 16.04, inopedza ndangariro zhinji uye girafu rinokundikana, iyo HUD haioneke uye mabara etumusoro haakwiri pamusoro, ngatitii zita rebara rehwindo haritsakike sepakutanga uye zvinotora. ini nzvimbo yakawanda
Pindura Cristian B
Izvo hazvindibvumidze (ini ndine 17.10 yakkety) asi rave riri dambudziko rekuvandudza kwechinguva (inogara ichipa kukanganisa, haina kutaurirana neserver). Chero mazano ekuti ungachigadzirisa sei kuti ukwidziridze kune bionic?
ne synaptic unogona kushandura server enda kuzvitoro zvekumisikidza wobva waenda kunotora kubva nekuchinja sevha iwe unogona zvakare kusarudza vamwe uye sarudza bhatani kuti utsvage zvirinani sevha uye kugadzirisa
vhara chikamu uye chinja desktop uye sarudza kubatana
Zvakanaka, ini ndaedza izvi zvaunotsanangura mu lubuntu 17.10 uye hazvindipe mukana wekugadzirisa kune lubuntu 18.04 saka ini handioni sarudzo inoshanda iyo yaunotsanangudza pano neruremekedzo rwese pasi, ndatenda .